မြန်မာရာဇဝင်လာ သမိုင်းဝင် အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၁) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« HRW World Report 2013 BURMA
မြန်မာရာဇဝင်လာ သမိုင်းဝင် အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၂) »
အိန္ဒိယလူမျိုး များဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၀၀၀)ကျော်ကပင် မြန်မာ့မြေပေါ် စတင်အခြေချ ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို အားဖြည့် လွှမ်းမိုးခဲ့နိုင်ကြပါသည်။
(စာညွှန်း (၁) မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ် အိန္ဒိယနိုင်ငံကြား အဝေးပြေး လမ်းမကြီးဖြစ်သည်။ “ပုဂံယဉ်ကျေးမှု” စာမျက်နှာ (၄၂)၊ ပါမောက္ခဦးသန်းထွန်း M.A.B.L, D. LIT, Ph.D
စာညွှန်း (၂) ရှေးဟောင်းပျူများ – စာမျက်နှာ (၃ နှင့် ၄)၊ ပါမောက္ခဦးသန်းထွန်း)
ကမ္ဘာပေါ်၌ တရုတ်ပြည်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သည် ရှေးအကျဆုံးသော လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ၎င်းနှစ်နိုင်ငံကို ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးက ကာဆီးထားသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ကူးလူးဆက်ဆံရေးမှာ တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲလှပါသည်။
သို့သော် ပထဝီသဘောအရ အိန္ဒိယတိုက်ကြီးမှာ အနောက်တောင်မှ အရှေ့မြောက်သို့ ရွေ့လျားပြီး မြန်မာနယ်စပ်၌ တိုက်မိသော ကြောင့် တွန့်ခေါက်တောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးမှာ အရှေ့အနောက် ရှိသော်လည်း ၎င်းတောင်တန်းကြီးများ၏ အရှေ့ဘက်ဆုံး တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် မှစ၍ တွန့်ခေါက်တောင်များမှာ မြန်မာပြည်ကိုဖြတ်၍ မြောက်မှတောင် သွယ်တန်းလျက်ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့ ကူးလူးဆက်ဆံရန် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေသော ဟိမဝန္တာတောင်မှာ မြန်မာပြည်ထဲသို့ ကွေးဝင်ပြီး နိမ့်ဆင်းသွားသဖြင့် တိဘက်နှင့် ယူနန်မှ ရှေးဦးလူများမှာ တောင်ကြားလမ်း၊ မြစ်ချောင်းများအလိုက် လွယ်ကူစွာ မြန်မာပြည်ထဲသို့ ဆင်းသက်လာနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Rivers flowing from China into Burma through the valleys
တဖန် ဟူးကောင်းတောင်ကြားလမ်း၊ အမ်းနှင့်တောင်ကုတ်တောင်ကြားလမ်း များမှတဆင့် တရုတ်-အိန္ဒိယ ရွှေလမ်း-ငွေလမ်း ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြပြီး ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ကို ဆက်သွယ်ပေးထားသော သဘာ၀ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ရပါသည်။
(စာညွှန်း 1. “ပုဂံယဉ်ကျေးမှု” စာမျက်နှာ (၄၂)၊ ပါမောက္ခဦးသန်းထွန်း)
2. Sri Ksetra was an important entrepôt between China and India. By Htin Aung, Maung (1967). A History of Burma. New York and London: Cambridge University Press.
ထို့ကြောင့် အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ခရီးသွားများ၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ၊ ကုန်သည်ပွဲစားများ၊ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သည့် သူများမှာ မြန်မာပြည်အတွင်း၌ တစစ အခြေခံ နေထိုင်လာခဲ့ကြပါသည်။
This entry was posted on February 1, 2013 at 11:09 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “မြန်မာရာဇဝင်လာ သမိုင်းဝင် အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၁)”
February 2, 2013 at 6:30 am | Reply
Excavations at Sri Ksetra have yielded the most extensive remains of Theravada Buddhism of the Pyu realm. Religious art suggests several distinct occupations with earlier influences stemming from Southeast India and later influences from Southwest India while 9th century influences include those from the Nanzhao Kingdom.
Aung-Thwin, Michael (1996). “Kingdom of Bagan”. In Gillian Cribbs. Myanmar Land of the Spirits. Guernsey: Co & Bear Productions. ISBN 0952766507. Page 24-26
January 24, 2016 at 3:36 pm | Reply
plz sir! Refer to rajah rah chola empire